प्रधानमन्त्री ओलीकाे समृद्धिका नाममा पाेष्टरमै कराेडाैं च्वाट - Articles Nepal
प्रधानमन्त्री ओलीकाे समृद्धिका नाममा पाेष्टरमै कराेडाैं च्वाट
Articles Nepal November 27, 2018 0
यति बेला हरेक नेपालीकाे मनमा एउटा कुरा खट्किरहेकाे हाेला … याे देश हाे कि प्राइभेट नम्बर प्लेटकाे गाडि हाे ? जसलाइ अाफ्नै मनाेमानी तरिकाले हाक्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तस्बिरसहित एउटा युगको सुरुवात भन्ने नारासहित काठमाडौंका धेरै बिजुली पोलमा ब्यानर टाँगिएका छन् भने सबैजसो अनलाइन र पत्रपत्रिकामा ज्याकेट एड प्रकाशित प्रशारित भएका छन् । टिभी र रेडियोमा पनि विज्ञापन गरिएको छ ।
याे समाचार सुनेपछि साेतन्त्र नेपाल फेसबुकमा लेख्छनः सर्वहारा नेताले राज्यको ढुकुटी रित्ताएर लाखौं रुपैया बिज्ञापनमा खर्चेर सेलिब्रेटी बन्न खोज्दैन। नैटङ्की नै बेसि । कुनै अन्तरीक्षमा रकेट पठाउन लागेको होइन सामाजिक सुरक्षा योजना हो जुन जनताको अधिकार हो। राम्रोलाई राम्रो भनिन्छ खुलेआम तर हनुमान बनेर राजा महाराजा बनाउन र जयजयकार गर्न सकिन्न ।
त्यस्तै प्रेम रिमालकाे प्रतिक्रिया यस्ताे छः एउटा नयाँ युगकाे शुरूवात भन्ने पदावलीसहितकाे बाेर्ड प्रत्येक पाेलहरूमा रातारात देखिए । ठूला घरानाका पत्रिकामा पनि अाज यही छापिएछ । त्याे बाेर्ड बनाउन, छपाउन, झुण्ड्याउन राज्यकाेषबाट कतिजति खर्च भयाे हाेला ? डिजायन गर्ने ठेक्का, छपाउने ठेक्का, टाङ्ने ठेक्का ! नयाँ युगकाे पक्षधर हुँ म तर अन्ततः केपी अाेलीलाई यसरी झुण्ड्याएर सखाप पार्ने याेजनामा निमग्न दानवहरूकाे फाेटाे हाेइन शरीर नै झुण्ड्याउनुपर्छ तब मात्र केपी अाेली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेकाे हाम्राे पार्टीले केही गर्ला अन्यथा प्रत्येक चाेक र चाैताराले हामीलाई मनमनै थुक्छन् र याे नियन्त्रण नभए अर्काे अावधिक चुनावमा हामीलाई घृणा र अपमानकाे बाढीले बगाउनेछ ।
जाे जाे कमरेड अाेलीलाई सिनित्तै निखार्न उद्धत छन् उनीहरूले मात्र याे हाम्राे नेतालाई पासाे लगाउने अपराधकाे पक्षमा लेख्छ र बाेल्छ ।
वातावरणीय दृष्टिकाेणले पनि बाटाेघाटाेका पाेलहरूमा हाेडिङ बाेर्ड झुण्ड्याउनु गलत हाे । अाफ्नाे नेता र पार्टीकाे बदाम गर्न राज्य काेषबाट पैसा खर्च गरी अधिकांस श्रमजीवी पत्रकार ठग्ने ठूलाघरेहरूलाई पाेष्नेहरूबाट सावधान बन सरकार !
Previous Post: २२ वर्षीया कमलाले जन्माइन तिम्ल्याहा शिशु, अार्थिक अभावमा उपचार भएन
Next Post: हल्लै हल्लाकाे देशः बाबुरामकाे निकासपछि अाेलीकाे समृद्धि, हात्ती अायाे फुस्स